အဆိုပါမီးရထားနည်းပညာဂရိတ်လမ်းမကြီးဧဒင်ကြမ်းပြင်တောင်ကိုရီးယားသွားရောက်ခြင်းအတွက် TCDD - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeလောကASIA မှ82 ကိုရီးယား (တောင်ပိုင်း)တောင်ကိုရီးယားရန်မီးရထားနည်းပညာဂရိတ်လမ်းမကြီးဧဒင်ကြမ်းပြင်လည်ပတ်မှုအတွက် TCDD
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 82 ကိုရီးယား (တောင်ပိုင်း), ASIA မှ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း 0
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဒုတိယဝန်ကြီး Enver İskurtနှင့် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သော, ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နည်းပညာဆွေးနွေးဖို့တောင်ကိုရီးယားသွားရောက်ခဲ့ပြီး, အင်တာဗျူးနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့စီးရီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုတောင်ကိုရီးယားအတွက်အမျိုးမျိုးသောအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ကြောင်းအထူးသဖြင့်မကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းİskurtနှင့် Hyacinth နှင့်အတူသင့်လျော်သော, AYGM ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Necdet မြန်နှုန်းရထားနှင့်ရထားလမ်းနည်းပညာ။
အထူးသဖြင့်အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး Kim ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု Sang-Gyun နှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်မှု, တောင်ကိုရီးယားမီးရထား (KRN) ကဲ့သို့သောရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ရထားလမ်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဖြစ်ကိစ္စများ, အခြေခံအဆောက်အအုံများ, ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျော်တိုးတက်လာဖို့တောင်ကိုးရီးယားသွားများစွာကိုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်နည်းပညာများ, သူခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်. အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။
ဂျူရီတောင်ကိုရီးယားရထားလမ်းသုတေသနအင်စတီကျု (KRRI) သွားလာမှုဘေးကင်းလုံခြုံမှုရထားလမ်းနဲ့ R & D ကိုလှုပ်ရှားမှုများကသူတို့နယ်ပယ်များတွင်အင်တာဗျူးနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုရီးယားကုမ္ပဏီအတွက်ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့ဆောင်တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ, ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့မီးရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေး၌တွေ့, သူတို့ကလည်းကောင်းစွာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအလုပ်လုပ်ကြသည်။
နှစ်နိုင်ငံအကြားရထားလမ်းပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးခဲ့ TEXT လက်မှတ်ရေးထိုး
İskurtဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟာတောင်ကိုရီးယားသင့်တော် ilexnumx ဇွန်လ 18 အင်္ဂါနေ့တွင်တူရကီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်သွားရောက်ခဲ့သည်။
task ကိုနှစ်နိုင်ငံအကြားရထားလမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တာဝန်ပေးအပ်ပြီးနောက် TCDD မှအလီ Ihsan သင့်လျော်သောအရှိန်အဟုန်ရရှိခဲ့ပြန် 2006 နှစ်စတငျရ။
Adapazarı TCDD တည်ထောင်ထားတဲ့နှင့် Hyundai-EUROTEM အဆောက်အဦ, လျှပ်စစ်ရထားအစုံနှင့်ခေတ်မီမြေအောက်ကားများအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဘို့လည်းတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေရဲ့အစုရှယ်ယာအလင်းရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်များကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လက်ထောက်သံအမတ်တူရကီ TCDD မီးရထားဝန်ကြီးလည်ပတ်ရန် 30 / 05 / 2016 တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လက်ထောက်သံအမတ်တူရကီမှ TCDD မီးရထားဝန်ကြီးတူရကီမှ General Manager ကသူ့ပါလာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူတောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံမီးရထားဒုတိယဝန်ကြီးဆီ İsa Apaydın'ငါသွားရောက်ခဲ့သည်။ TCDD, တောင်ကိုရီးယားရထားလမ်းလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာ Woo ပန်းခြံနှင့်တူရကီဟီရိုရှီ OKADA ဂျပန်သံအမတ်ကြီးကြိုဆိုတောင်ကိုရီးယားမြေယာ, အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန, ဒုတိယဝန်ကြီးမီးရထားဝန်ကြီးအောင်မင်းဝူးပန်းခြံနှင့်သူ၏ပူးတွဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို, သမိုင်း 26 မေလ 2016 အတွက်အထွေထွေမန်နေဂျာ İsa Apaydın'ငါသွားရောက်ခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထား, များစွာသောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင်ခဲ့သည့်ခရီးစဉ်သည်, နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့် ...
တောင်ကိုရီးယား၏သမိုင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးရထားလမ်းသပိတ် 01 / 01 / 2014 တောင်ကိုရီးယားရဲ့အဆိုးဆုံးအစဉ်အဆက်ရထားလမ်းသပိတ်: တောင်ကိုရီးယား 22 နေ့ကမောင်းနှင်မှုဖြစ်ပါတယ်ပါလီမန်၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အထပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ, ထိုဒဏ်ခတ်။ တောင်ကိုရီးယား၏သမိုင်းအတွက်စက်လုပ်သမားအရှည်ဆုံးသပိတ်နောက်ဆုံးတော့အဆုံးသတ်သို့ရောက်ကြ၏။ ပါလီမန်၏စစ်ဆင်ရေးသို့ entry ကိုအတူ 22 နေ့ကသပိတ်ကြောင်းအမျိုးသားမီးရထားအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (UDisk), သူတို့ကသပိတ်အဆုံးသတ်ထားခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ မိမိအတာဝန်ရှိသူတဦးကကြေညာချက်တွင် UDisk သူကအလုပျသမားကျော2ရက်ပြောင်းရွှေ့အလုပ်အပေါ်ပုံမှန်အတိုင်းလမ်းလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ဟုပြောသည်။ အမြဲတမ်းတောင်ကိုရီးယား3ရက်သတ္တပတ်အကြာဆုံးရှုံးမှု Suseo လိုင်းရဲ့အသစ်အစိုးရစိတ်ကြိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ယူစက်လုပ်သမားသူတို့ခြေထမြောက်တော်မူ။ ယင်းသပိတ် UDisk ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာအတူလေ့ကျင့် ...
Vago 5, 60 နှင့်အတူတောင်ကိုရီးယားကနေရောက်ရှိမနေ့က Marmaray ပြီးစီးခဲ့လှည်း။ 21 / 03 / 2012 မိုးလှည်း5လိုအပ်ပါတယ်ရာ Marmaray စီမံကိန်းကိုတောင်ကိုရီးယားကနေယူဆောင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်လာမယ့်အသစ်သောကားအရေအတွက်သည်ယခင်က 55 လှည်းနှင့်လှည်းများ၏နိဒါန်း 60 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသစ်ကရောက်မှု၏စမ်းသပ်ခြင်းသတင်းများအရကားများမောင်းနှင်ခဲ့ကြသည်။ အများကြီးလှည်း၏ပြောဆိုသောအဆိုပါ Marmaray စီမံကိန်းကိုယူဆောင်ခဲ့ကြသည် ... Wagon, တောင်ကိုရီးယားအနေဖြင့်အသုံးပြုရရန် Marmaray စီမံကိနျးအတှကျအစ္စတန်ဘူလ်မှယူဆောင်ခဲ့သည်။ drive ကိုကားများစမ်းသပ်ဖို့ဆက်လက်နေချိန်မှာအသစ်သောကားများ mounting ဖြစ်စဉ်ကိုအစပျိုးခဲ့ပြီးအဆိုပါ5ပြီးနောက်ယခင်ကအစ္စတန်ဘူလ်မှယူဆောင်ဆောင်ခဲ့သော Marmaray စီမံကိန်းများအတွက် 55 အသစ်သောကားများ။ "Haydarpaşaအတွက် Wagon" ဟုလှည်းစဉ်အခါ, 555ထံမှအသစ်သောကားအရေအတွက်သည်နှင့်အတူ Wagon ပြီးနောက်ယခင်က optimized 60 လှည်း ...
တူရကီကနေသန်းလမ်းရထားအလို့ငှာ 80 ဖို့တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ 09 / 08 / 2014 တူရကီလမ်းရထားထံမှ 80 ဒေါ်လာသန်းအလို့ငှာကုမ္ပဏီများတောင်ကိုရီးယား: တောင်ကိုရီးယားရဲ့ Hyundai Rotem ကုမ္ပဏီထံမှကုမ္ပဏီ, တူရကီကနေ 80 သန်းဒေါ်လာအဆိုပါလမ်းရထားယူနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ တင့်ကားများကိုရီးယား၏နံပါတ်တစ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် 83,7 ဘီလီယံခန့်နှင့်အတူတူရကီGülermak Heavy Industries, ဆောက်လုပ်ရေး & ချုပ်ဝင် Corporation ၏ Hyundai Rotem ကုမ္ပဏီထံမှ, လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သဘောတူညီချက်များတန်ဖိုးရှိအစီရင်ခံခဲ့သည် (အကြောင်းကို 80,9 သန်းဒေါ်လာ) ကိုလမ်းရထား၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အနိုင်ရလေ့။ Hyundai Rotem ကုမ္ပဏီထံမှဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ထရေးဒင်း Joint Stock Company ကလာသည်ဟုဖော်ပြထားဒီနေ့ကြေညာချက်ထဲမှာလမ်းရထားထုတ်လုပ်မှုGülermakအကြီးစားစက်မှုလက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကုမ္ပဏီ၏အမိန့်ကဆိုသည်။ Gülermakကုမ္ပဏီ Izmir အတွက်အမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်၏တောင်ပိုင်းဒေသများသို့အပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်
လက်မှတ်ထိုးနားလည်မှု TCDD-တောင်ကိုရီးယားမီးရထားစာချွန်လွှာ 19 / 06 / 2019 TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan က Man-Kyung အသုံးပြုပုံသင့်လျော်သောနှင့်တောင်ကိုရီးယားရထားကွန်ယက်အာဏာပိုင်ဒုတိယသမ္မတ Jin က "ဟုအဆိုပါမီးရထားဧရိယာများတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်နားလည်မှုစာချွန်လွှာအကြားတောင်ကိုရီးယားနှင့်အတူ TCDD" 18 ဇွန်လ 2019 အင်္ဂါနေ့, TCDD အကြီးစားအစည်းအဝေးခန်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် ။ သင့်လျော်: အလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြား TCDD "နားလည်မှုစာချွန်လွှာ, အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှနျဆာပစျလိမျ့မညျ" ကြောင်းအလေးပေးနှစ်နိုင်ငံအကြားသမိုင်းဝင်အတိမ်အနက်နှင့်အတူအထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan အဆင်ပြေ, ဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေး, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပို့ဆောင်ရေးမီးရထားကဏ္ဍစာချွန်လွှာ၏နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးများအားဖြင့် 2017 တစ်နှစ်, ရှိသမျှဒေသများရှိကြီးထွားဖို့ဆက်လက် နားလည်မှုသတိပေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ဤသည်နေ့ရက်သည် "သင့်လျော်သော ...
တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လက်ထောက်သံအမတ်တူရကီ TCDD မီးရထားဝန်ကြီးလည်ပတ်ရန်
Vago 5, 60 နှင့်အတူတောင်ကိုရီးယားကနေရောက်ရှိမနေ့က Marmaray ပြီးစီးခဲ့လှည်း။
တူရကီကနေသန်းလမ်းရထားအလို့ငှာ 80 ဖို့တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ
ပြည်ထောင်စုအရာရှိများ Strike အခမဲ့အပေါ်အဖမ်းခံရတောင်ကိုရီးယားရထားလမ်း